Kuenda parwendo - Ndeapi matipi akanakisa ekushandisa? | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 12:00 | famba
Enda parwendo, ona nzvimbo itsva uye bvisa Izvo zvinhu zvitatu zvezvinhu zvatinowanzofarira zvakanyanya uye zvinofambidzana. Pamusoro pazvo, zvinofanirwa kutaurwa kuti izvo zvakare zvakakosha kune hutano hwedu hwepfungwa. Saka kana uri kufunga kutora rwendo, zvakanaka kuronga zvose pachine nguva kuitira kuti usarasikirwe nechimwe chinhu.
Kunze kwaizvozvo, tinokusiya iwo akanakisa matipi kuti iwe ugone kuaisa mukuita. Zano rinobatsira zvikuru ratinoziva asi ratisingawanzo cherechedza kusvikira nguva yapera. Saka, takakuitira rondedzero. Chasara kuti iwe uverenge wakadzikama uye unyore zvakanaka. Zororo rinofadza!
1 Usatakura mari yese munzvimbo imwechete
2 Bet pakuziva nzvimbo dziri pedyo
3 Ita tsvakurudzo usati waenda
4 Kana uchida kuchengetedza, chinjika
5 Usapfeke mbatya dzakawandisa kuti uende parwendo
Usatakura mari yese munzvimbo imwechete
Hazvinei kuti tichashandisa zvifambiso zvipi parwendo. Chinhu chakanakisa ndechekuti haumbofa wakatakura mari yese munzvimbo imwechete. Unogona kutakura zvimwe muhomwe dzako uye zvimwe mubhegi rako, nezvimwe. Nenzira iyi chete tichava nechokwadi chokuti, mune chimwe chiitiko chisingafanoonekwi, hatifaniri kurasikirwa nezvose. Ichokwadi kuti mari yakasununguka tinofanira kutakura chimwe chinhu asi kwete yakawandisa. Zvinogara zvichikurudzirwa kuve nekadhi raungave usina mari yakawandisa asi inokwana rwendo uye handiko kwaunenge uine mari inodiwa kana mamwe mabhiri ako. Zvechokwadi, hazviiti nguva dzose kuva nevanopfuura imwe uye hazvina kukosha zvakare.
Bet pakuziva nzvimbo dziri pedyo
Ichokwadi kuti vakatibvunza kuti rwendo rwezviroto zvedu chii kana kuti kwatinoda kuenda, vanorota mazita ari kure semutemo. Zvakanaka, zvinofanira kutaurwa kuti pane dzimwe nguva tichawana mashura makuru kana tikaramba tiri pedyo nekwatinogara. Nekuti isu zvakare takakomberedzwa nenharaunda nemaguta ekuongorora. Uye zvakare, zvirokwazvo isu tichawanawo makuru ekupa sezvo asiri iwo kunyanya nzvimbo dzevashanyi.
Ita tsvakurudzo usati waenda
Kana pakupedzisira iwe ukatakurwa neino nzvimbo iri kure, saka zvakakosha kuti uongorore zvishoma nezvazvo. Iye zvino tave nehunyanzvi pamunwe wedu uye nekudzvanya tinogona kuziva tsika dzese, gastronomy yayo uye nzvimbo dzakashanyirwa zvakanyanya. Saka, hazvikuvadze kuti une chimwe chinhu chawakaronga maererano nezvaunoshanyira. Hongu, ichokwadi kuti kana paine zvirongwa izvi zvinogona kuchinja zvichienderana nenguva, asi zvirinani, tinogona kuva nedzimwe nzvimbo dzinofanira-kuona mupfungwa.
Kana uchida kuchengetedza, chinjika
Imwe pfungwa yakakosha pakuita rwendo kuda kuchengetedza mari. Zvakanaka, kana iwe uchida kusashandisa mari yakawandisa parwendo chete, saka unofanirwa kuchinjika maererano nemazuva kana maawa zvakazara. Nekuti kana iwe ukatsvaga rimwe zuva uye isu toenda takananga kupera kwevhiki, mitengo inokwira mudenga. Ndizvo zvinoitikawo kune dzimwe nzvimbo, ndosaka takatokuraira kuti ubheje panzvimbo dziri pedyo kana nzvimbo dzisinganyatso zivikanwi sezvatinofunga.
Usapfeke mbatya dzakawandisa kuti uende parwendo
Imwe yenguva dzinotyisa inguva yekurongedza. Nokuti zvinoratidzika kuti tinoda zvose uye zvakawanda, asi zvino tinoshandisa zvishoma kudarika hafu. Saka, zvichienderana nemwaka watichapfeka zvipfeko zvekutanga uye shangu dzakanyatsogadzikana dzezuva uye imwe yatingada manheru ano. Zvakanakisa kubheja pamazano ekutanga anogona gare gare kushandura chimiro uye kutipa kutarisa kwechipiri nekuwedzera zvishongedzo. Chimwe chinhu chinoitika nejasi dema, kana nejeans uye machena blouse, semuenzaniso. Iye zvino chasara ndechekuti iwe unakirwe kana uri kuenda parwendo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » famba » Mazano akanakisa ekufamba rwendo
Hutano hutsika hunokubatsira kuti unzwe zvakanaka